» ‘लकडाउन’मा तनावबाट मुक्त रहन के गर्ने ? यस्ता छन् उपाय
‘लकडाउन’मा तनावबाट मुक्त रहन के गर्ने ? यस्ता छन् उपाय
१२ चैत्र २०७६, बुधबार ०८:४८
कोरोना भाइरसको जोखिम नियन्त्रण गर्न भारत सरकारले चैत्र ९ गते १४ घन्टा जनता कर्फ्यू लगाएको थियो । मंगलबारबाट फेरी कर्फ्यू लगाएको छ।
परिवारसँग रमाउनुहोस्ः सधैं काममा व्यस्त भएकाहरुलाई यतिबेला एउटा संयोग जुरेको छ परिवारसँग बस्ने। यो अवसर हामीले चाहेर पनि कहिल्यै पाउँदैनौ। त्यसैले यतिबेला बाबु आमा छोराछोरी सबै सँगै मिलेर खाना पकाउने, सरसल्लाह गर्ने गर्नुपर्छ।यसो गर्दा आत्मियता बढ्नुको साथै तना पनि कम हुन्छ। आजको अन्नपूर्ण पोष्टबाट